Kusawirirana pakati pevakaroorana maererano nekudzingiswa - Rabbi Michael Avraham
Kusawirirana pakati pevakaroorana maererano nekuchecheudzwa
Responsa > Category: General > Kusawirirana pakati pevakaroorana maererano nekuchecheudzwa
Pine Yakabvunzwa makore matatu apfuura
Mhoro Rabhi uye mazororo anofara,
Kana pakaitwa nyaya yekuti pane kunetsana pakati pevabereki vaviri maererano nekuchecheudzwa kwemwana. Pamutemo uye/kana mutsika, bato rinenge richida kudzingiswa ringabvumidzwa here kuita izvi? Kana kuti mamiriro acho ezvinhu anofanira kumbomiswa ndokurega mwana achisarudza kana akura here?
Zvinoenderana nekuti zvibvumirano zvaive zvakadii pakati pevaviri kubva pakutanga (pavakaroorana). Kana pasina chibvumirano chakajeka uye chisingagoni kuderedzwa kubva mujeri (semuenzaniso tsika iripo munharaunda yavo) nezvimwewo, zvino zvinoratidzika kwandiri kuti mutsika munhu anofanira kurega mwana achisarudza paanokura.
Chinese uye steril Akapindura makore 2 apfuura
Tsika kubva pamutemo wechitendero kwete?
Uye kana pane kupesana pakati pechitendero netsika pano, uchashandisa pfungwa dzenharaunda uye unoda tsika here? (Chaizvoizvo, wadii kushandisa izvi zvakajairika kumwana? Somuenzaniso munzvimbo umo mutemo kana nzanga isingatenderi shoko)
Vechitendero zvechokwadi kwete. Uye kuti kupokana naamai kunobvisa mutoro wababa?
Handina kunzwisisa mubvunzo wendima. Kubatana chii?
Zvose zvinogadzirwa. Chii chakakosha kune ese marudzi e accounting '?
mikyab On Mhinduro kuna Itamar Ben Gvir
Zvakawanda zvishoma (kuHananeri) On Iran iri pano here? Pamusoro peKufambira mberi uye Sane Liberalism (Koramu 483)
Yossi Laor On Iran iri pano here? Pamusoro peKufambira mberi uye Sane Liberalism (Koramu 483)
Hananel On Iran iri pano here? Pamusoro peKufambira mberi uye Sane Liberalism (Koramu 483)